သူ့ရဲ့ ဆေးကုသခန်းထဲကို ပြန်ဝင်လာပြီးတော့ သူမအသက်ကို ကယ်ဖို့အတွက် သူတတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ဆေးကုသမှုကို ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကစလို့ ဆရာဝန်ကြီးဟာ သူကိုယ်တိုင် အထူးဂရုစိုက်ပြီး အကောင်းဆုံး ကုသမှုကို ပေးပါတယ်.. ရက်ပေါင်း အတော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ရောဂါနဲ့ ပညာရှင် လွန်ဆွဲနေတဲ့ပွဲမှာ ဆရာဝန်ကြီး အနိုင်ရသွားပါပြီ။ လူနာအသက်ကို သူ ကယ်လိုက် နိုင်ပါပြီ။ လူနာမိန်းခလေး ရောဂါ သက်သာလာလို့ ဆေးရုံက ဆင်းခါနီးမှာတော့ ဆရာဝန်ကြီးက ဆေးရုံရဲ့ ဆေးကုသစရိတ် ပေးချေရာဌာနကို သွားပြီး မိန်းခလေး အတွက် ကျသင့်တဲ့ ဆေးဖိုးကုန်ကျငွေ စာရွက်ကို သူ့ဆီကို ပို့ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆေးကုသစရိတ် ကျသင့်ငွေစာရွက် ရောက်လာတဲ့အခါ ဆရာဝန်ကြီးက တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ စာရွက်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ချရေးလိုက်ပါတယ်။ ရေးလိုက်ပြီးတာနဲ့ အဲဒီစာရွက်လေးကို မိန်းခလေးထံ ပို့ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်..
ဆေးကုသစရိတ် စာရွက်ကလေး မိန်းခလေးဆီကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ စာရွက်ကို ဖွင့်ကြည့်ဖို့သူမ ကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့သူမတို့အနေနဲ့ ဒီဆေးကုသစရိတ်ဟာ အင်မတန်မှ များပြားလွန်းနေမယ်ဆိုတာ သိနေခဲ့ပြီး သူမတစ်ယောက်တည်း အနေနဲ့သာဆို ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အလုပ်လုပ်ပြီး ဆပ်ရင်တောင် ကြေနိုင်ပါ့မလားရယ်လို့ တွေးနေမိပါတယ်။ သို့သော်လည်း နောက်ဆုံးတော့ စာရွက်ကို သူမ ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်.. ဖွင့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ စာရွက်အောက်ဆုံးမှာ ရေးထားတဲ့ စာကြောင်းလေးက သူမရဲ့အာရုံ တစ်ခုလုံးကို ဖမ်းစားထားလိုက်ပါတယ်။
“ကျသင့်သမျှ ဆေးဖိုးအားလုံး နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့ ပေးချေပြီးပါပြီ ”
အောက်မှာတော့ သူမငယ်စဉ်က နွားနို့တစ်ခွက်တိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်လေးရဲ့နံမည်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူဟာ ခုချိန်မှာတော့ ဆရာဝန်ကြီး “ဟောင်းဝတ်ကယ်လီ” ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ စာရွက်ပေါ်က လက်ရေး စာလုံးလေးတွေနဲ့ ထိုးထားတဲ့ လက်မှတ်လေးကို ကြည့်ပြီး သူမရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကနေ ၀မ်းသာကြည်နူးမှု မျက်ရည်တွေ တစ်လိမ့်လိမ့် ကျဆင်းလာပါတော့တယ်။ ဘာကိုမှ မမျှော်ကိုးဘဲ တိုက်ကျွေးခဲ့မိတဲ့ နွားနို့လေးတစ်ခွက်ဟာ သူမရဲ့ အသက်ကို ကယ်လိုက်နိုင်ရုံသာမက များပြားလှတဲ့ ဆေးဖိုးတွေကိုပါ ပေးချေ ပစ်နိုင်လောက်အောင် တန်ဖိုးကြီးလှတယ်ဆိုတာ မယုံနိုင်လောက်အောင် ထူးဆန်းနေပါတော့တယ်.. တကယ်တမ်းတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်လေးဟာ “တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးမှာ” ဆိုတဲ့ စကားရပ်လေးက မှန်ကန်လှကြောင်း သက်သေဘဲ မဟုတ်ပါလားနော်။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ ကျွန်မ စာရေးခါစကတုန်းက ဘာသာပြန်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အကြောင်းအရာလေးကို နှစ်သက်မိတာမို့ မဖတ်ဖူးသေးသူများ ခံစားကြည့်ဖို့နဲ့ ဖတ်ဖူးပြီးသူများလည်း ပြန်လည်ခံစားဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ မပြောပလောက်တဲ့ အကြင်နာလေးဟာ တစ်ဖက်သားအတွက် မထင်မှတ်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိသွားတတ်တယ်ဆိုရင် တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးမှာဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီ အကူအညီ လိုအပ်နေသူများ၊ ဒုက္ခရောက်နေသူများကို ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် စေတနာရှေ့ထားလို့ ကူညီသင့်ကြတယ် မဟုတ်ပါလားနော်။
A Glass of Milk (Unknown Author)ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
26 Responses to “နွားနို့တစ်ခွက်...”
နွားနို့တစ်ခွက်ကို အရသာခံရင်း link ပါ ယူသွားကြောင်းပါခင်ဗျား...
စေတနာ မေတ္တာ အတွက် တန်ဖိုးအဖြစ် တစ်ဖက်လူဆီက ဘာကိုမှ ပြန်လက်မခံဖို့ ဆိုတဲ့စကားလေးနှစ်သက်မိပါတယ်။
စေတနာ မေတ္တာရဲ့ စွမ်းအင်ကိုပေါ်လွင်အောင် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မချောရေ ....
စေတနာ ရောင်ပြန်ဟပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ ဘာကိုမှမမျှော်ကိုးပဲ ကူညီလိုက်တာ အကျိုးကျေးဇူးက မျှော်ကိုးပြီး ပြန်မရတာထပ် ပိုပြီး ကြည်နူးဖို့ကောင်းနေပါတယ် ။
တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးမှာတဲ့.. သိပ်မှန်တယ်ဗျာ...
တော်လိုက်တဲ့ ငါ့အစ်မ..... ဖတ်ရတာ ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထတယ်... ဒါမျိုးလေးတွေဖတ်ရရင် စိတ်ထဲ ကြည်နူးမိတာအမှန် အစ်မရေ....
အစ်မချောစာတွေက ဖတ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ကို ခံစားမှုပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဗျ... ကျနော်လဲ ကြိုးစားဦးမယ်
ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေးအခေါ်. . မှတ်သားသွားပါတယ် အမရေ
အဲဒီအတိုင်းဘဲ အမတို.အထက်တန်းတုန်းက englishသင်၇ိုး မှာ သင်၇တယ်။ lesson နံမယ်က A cup of milk တဲ.။ အဲဒီကတည်းက အမသိပ်ကြိုက်ခဲ.တာ။
စာလေးလည်းကောင်းတယ်။ ဘာသာပြန်ဆိုချက် လေးလည်း ကောင်းတယ်။ လောကမှာ ကောင်းကောင်း၊ဆိုးဆိုး ဘယ်အရာမှ အလကားမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ သဘော ဒီလို အဖြစ်မျိုးလေးတွေက သက်သေခံပါတယ်။ တစ်ဦးမေတ္တာ၊ တစ်ဦးမှာ ခိုင်မြဲတုန့်ပြန်နိုင်ပါစေ။ စေတနာပန်းခင်း။
အိပ်ချင်နဲ့မူးတူး ဝက်ဆလူး said...
ရွှေချောရယ် like button လေးများ မရှိဖူးလား များ ကွန်မန့်ပေးရမှာ ပျင်းလာဘီ ဟင့် ထုမှနိုးတာ လူက အိပ်ချင်နဲ့မူးတူးရယ် like button ရှိရင် အဲဒါလေး ကလစ်လိုက်ရုံပဲ ဘောက်ကောင်းထားလဲ နော် ........
ကူညီတဲ့ သူကလည်း တုံ့ပြန်မှုကို မမျှော်လင့်ခဲ့သလို အကူအညီကို ရတဲ့သူကလည်း ကျေးဇူးမမေ့ခဲ့တော့ သူတို့နှစ်ဦး ပြောင်းပြန် အခြေအနေနဲ့ ပြန်ဆုံရပေမယ့် ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်၊ မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ မချော..။
Z လမ်းလေး ဖတ်ပြီး တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်
မရည်ရွယ်ပဲ စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ကူညီပေးလိုက်လို့ ရလာတဲ့ မေတ္တာရောင်ပြန်တွေ ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးကြတာချည်းပါပဲ..
ဆက်ပြီး စိတ်ထားသန့်ဖို့ အခက်အခဲကြုံလာသူကို ဖေးမဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါပဲလေ..။
တစ်ဦးကစေတနာ တစ်ဦးက မေတ္တာပေါ့။
ဒါနဲ့ ပို့စ်က အကြာကြီးမှ တက်တယ်နော်
ဒါပဲ ပြောလို့ ရပါသည်။
ခင်တဲ့...။
အစ်မချောရေ... ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခု ကျန်ခဲ့တယ်။ ပာတ်ထိတယ်။ ဘာကိုမှ မျှော်ကိုးခြင်း မရှိဘဲ အကူအညီ ပေးလိုက်တာ တစ်ပါးသူ လိုအပ် နေတဲ့ အချိန် ဆိုတော့ ကုသိုလ် ရတဲ့ အပြင် စိတ်ခွန်အားတွေပါ ပေးလိုက် သလို ဖြစ်သွားတယ်နော်။ နွားနို့လေး တစ်ခွက်ထဲမှာ လူသားချင်း စာနာ နားလည်မှု၊ ကူညီမှုတွေ ပါဝင်နေလို့ အဖိုး မဖြတ်နိုင်ပါဘူး။
ရင်ထဲမှာ ကျေနပ်သွားတယ်...ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် တုံ့ပြန်မှုကောင်း ဆိုတာကို မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြူစင်နိုင်တဲ့ အထိရောက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေရတုန်းပါ...
It hit my heart with so many feeling.Anyway.......
All the charactors in it and you.
Longing for another post like this.
အဲလိုမျိုး စိတ်ဓါတ် ရှိတဲ့ လူသားတွေ များများလိုတယ်နော် .. ကျေးဇူးပါ အစ်မး)
အတုံ့အပြန်ကို မမျှော်လင့်ထားတဲ့ စေတနာအတွက် တန်ပြန်မှုတွေ ရှိနေတာပါပဲ။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ တော်တော် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရမှာပါပဲ။
ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ဘဲ ကူညီတာ ကူညီသူအတွက် စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်။
ဖတ်ပြီးတော့ မျက်ရည်လည်ပြီး ရင်ထဲစို့နင့်သွားအောင် အရမ်း ကောင်းတယ် မမရယ်...